I-Private Self Catering Villa ene-Mountain Views
Casoli, Abruzzo, i-Italy
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Rob
Izungezwe izihlahla zomnqumo kanye nezintaba ze-Abruzzo kuhlala indawo yabashadikazi abafuna ukubalekela endaweni encane yokuthula yase-Italy.
Sitholakala phakathi kwemvelo, imizuzu engama-40 nje ukusuka e-Pescara Airport, imizuzu engama-30 ukusuka emabhishi abizayo futhi cishe amahora ama-2 ukusuka e-Rome.
Iziqukathe ngokuphelele, i-villa yethu ilungele izithandani eziziphekelayo ezifuna ukuhlala ngokuthula. Ngayinye ifakwe ikhishi lesimanje, indawo yokuhlala ene-TV nendawo yokugezela yaphansi.
Igumbi lokulala libekwe ezingeni le-mezzanine elinikeza i-villa umuzwa oyingqayizivele futhi ovulekile onesikhala esanele.
Kunendawo encane yethala ngaphandle kwe-villa embozwe uhlangothi ngalunye ngothango okuyenza ibe yindawo yangasese enokubukwa.
Indawo Ezungezile kanye Nephuli
Sinechibi elikhulu elibuye liziqhenye ngokunye kokubuka okuhle e-Abruzzo, libheke ngqo ezintabeni! Yindawo eyimfihlo ezokwabelwa izivakashi okungenzeka ukuthi zihlala kwenye yezindlu zethu ezimbili ezinhle.
Lapho sifika sinendawo yokupaka yangasese yakho endaweni yethu ehlala eduze kwendlu yethu. Ngaphansi kwegquma kuhlala ama-villas ethu kanye nedamu. Yindawo eseceleni kakhulu futhi enokuthula enganakwa.
Amakamelo ethu e-Villa angafinyelelwa kuphela ngezitebhisi.
Njengoba sihlala egqumeni kunamaleveli amaningi nezitebhisi ezizungeze indawo, sihlala sicela ukuqaphela.
4.75(4 okushiwo abanye)
Emamayela ambalwa nje ukusuka edolobheni elincane lomlando laseCasoli, kunendathane yezindawo nolwazi endaweni ezungezile lapho ungamangala khona imigwaqo emincane nenemibalabala noma upheqa izimakethe zendawo.
'Sehle nje ngomqansa' sineqoqo elincane lezitolo, amakhefi nezindawo zokudlela. Siyathanda ukudla futhi sinezincomo ezinhle zokuthi ungadla kuphi ukudla okumnandi kwasendaweni!
Sathuthela e-Italy ngo-2018 sisuka e-UK futhi siyakwamukela ukuthi wabelane ngempahla yethu enhle! Sihlala phezulu nje kwegquma ukusuka ezindlini ezivamile futhi sikhona ukuze sisize ngezincomo futhi sithanda ukusiza lapho singakwazi khona, umnyango wethu wangaphambili uhlala uvuliwe!
Njengoba sihlala endaweni eqhelile, yingakho sibukeka ngendlela emangalisayo, sihlala samukela izivakashi zethu ngezinto eziyisisekelo ezifana nebhulakufesi nesinkwa esisha.
Sathuthela e-Italy ngo-2018 sisuka e-UK futhi siyakwamukela ukuthi wabelane ngempahla yethu enhle! Sihlala phezulu nje kwegquma ukusuka ezindlini ezivamile futhi sikhona ukuze sisi…